Nddị & ọchụchọ maka isiokwu na isiokwu:ihe nkiri
Ruo afọ 40 ọ rịgoro ugwu niile maka rodgers & hammerstein
2021-05-31 Aterlọ ihe nki...
Ted Chapin na-ahapụ onye isi nke nzukọ ahụ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-agaghachi "Oklahoma! " Ma na-anụ "ụda egwu".
ụlọ ihe nkiri sịnịma kacha mma na UK n’oge anwụ
2021-05-31 Ihe nkiri
N'agbata mgbochi njem, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, oghere ikuku na-adịghị mma n'ime na ihu igwe n'èzí, anyị anaghị akwadebe maka nnukwu oge ọkọchị Britain. Mkpuchi ọlaọcha ị na-achọ nwere ike ịbụ nnukwu ihuenyo. Cinkwọ ụgbọala na-emepe emepe na ikuku dị ka nke kachasị mma nke ọtụtụ ụwa: ị na-apụ n'ụl
Otu ihe omume nke onye edemede, na-aga n'ihu mbilite n'ọnwụ ya
Site na ichota ihe osise nke ndi nwanyi ojii Kathleen Collins, ndi otu egwuregwu na-acho ime ka ha mara ihe, gwọ ndi mmadu ma gbaa ha ume.
Adị m nke nkịtị: Otu akụkọ banyere otu Fangirl Akụkọ - enweghị anya mmiri, mkpu na nkwanye ugwu
2021-05-30 Ihe nkiri
Ọ gwụla ma ị nwetara ahụmịhe nwa nwoke ahụ, ọ nwere ike isiri gị ike ijikọ echiche nke ọnụ ọgụgụ azụmahịa PG na nnukwu, enweghị njedebe, ntinye uche nke ndị na-eto eto na-eche. Ọdịnala nke ọdịnala bụ ịkwa emo, ịjụ na ịkpaghasị ụmụ agbọghọ na-eto eto nke fandom meriri (lee, otu narị afọ tupu ndị otu
Nnyocha nke Cruella - Emma Stone bụ ọ asụ dị ka nlekọta na-agbanwe agbanwe
Na Dalmatians nke 101, Glenn Close ji obi uto megharia ihe dika onye mmebe nkpuru akpukpo aru wuru n’elu ndi okenye nke ihe omuma banyere ohaneze dika “bunny booster” na Fatal. Emma Stone's Cruella de Vil nwere ntọala karịa n'ihi ya, ọ bụghị dị ka ogige, onye nlekọta nwere akụkọ a na-ekwenye ekwenye